Headline Nepal | नेकपाको नेतृत्व नै लथालिंग
नेकपाको नेतृत्व नै लथालिंग
२९ कार्तिक,काठमाडौं - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय शिर्ष ९ नेता सम्मिलित ‘चेन अफ कमाण्ड’ हो । पार्टीमा कुनै समस्या देखिए सचिवालयले समाधान गर्ने गर्दछ ।
सचिवालयमा निर्णय भएपछि नेता कार्यकताले के गर्न हुन्छ के गर्न हुदैन भनेर अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गर्ने गरेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकपछि पछिल्लो पटक अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले यस्तो निर्देशिका जारी गरेका छन् । तर, सो निर्देशिका सचिवालयकै नेताहरुले नपढेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारसँग खुलासा गरे ।
करिव ४० मिनेटमै सकिएको बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्र र प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रका बारेमा सामान्य छलफल भएपछि सचिवालय सदस्यले अन्तरपार्टी निर्देशिका अध्ययन गर्ने भएका छौँ । सो अध्ययन गरेपछि मंसिर ३ गते पुनः बैठक बस्नेछौँ ।’
सो निर्देशिकामा पार्टी हित विपरित काम गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जालबाट नेतृत्वको विरोध गर्न नपाइने, कुनै विषयमा चित्त नबुझे पार्टीका सम्वन्धित निकाय वा बैठकमा विधि सम्मत रुपमा राख्नुपर्ने उल्लेख छन् । तर, यस्ता विषय कार्यकर्तालाई मात्र लागु हुने कुरा प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाईबाट खुल्छ । शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा ओलीको आलोचना गर्दै आएका पाँच नेता मौन बसेका थिए ।
बैठक बोलाउन माग गर्दै बुझाएको पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पठाएपछि त्यसको पनि जवाफ दाहालले शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा पेश गरेका थिए । दाहालको पत्र बुझेपछि ओलीले अब बैठकबाटै समस्याको समाधान गरौं भनेर जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि बैठक तिहार लगत्तै अर्थात मंसिर ३ गते फेरी बस्ने गरी नेताहरु उठेर हिडेका थिए ।
बैठकमा पार्टीमा उत्पन्न विवाद, समस्या र त्यसको समाधानलाई कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उक्त कार्यसूची अन्तर्गत यसअघि स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यन्वायनको विषय, कर्णाली प्रदेशको विवाद, पर्सा लगायतका स्थानमा पार्टी कार्यकर्ताबीच भएको दोहोरो झडप, कोभिड–१९ र त्यसले उत्पन्न गरेको आर्थिक संकट, पार्टी र सरकारका बीच उत्पन्न विवाद र भारतीय गुप्तचरका प्रमुखको नेपाल भ्रमणको विषयमा छलफल हुने श्रेष्ठले बताए ।
अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई लेखेको पत्र र उक्त पत्रको जवाफमा दाहालले ओलीलाई लेखेको पत्र तथा पार्टीको संकट र निवारणको विषयमा सचिवालयमा छलफलका लागि अध्यक्ष दाहालले तयार गरको प्रस्ताव, स्थायी कमिटीको बैठक पछाडी जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशिका सबै सचिवालय सदस्यलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ ।
ओली-दाहाल वाकपछि पत्रयुद्ध
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच वाकपछि अब पत्रयुद्ध चल्न थालेको छ ।
दाहाललाई दस पृष्ठ लामो प्रत्युत्तर पत्र लेख्दै ओलीले चार महिनाको महाधिवेशन किन कुर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘पटक–पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका तपाईं सचिवालयका कमरेडहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँध्ने र घेराबन्दी गरिएको थियो र ? थोरै नै होला, सरकारले गरेका सकारात्मक काम सरकारमा रहनेले मात्रै प्रचार गर्ने, पार्टीपंक्तिलाई मौन राखिएको थियो र ? सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थनमा कोही बोल्न नहुने, केही चर्चा भएमा कसैको देवत्वकरण भन्दै ईष्र्या गर्ने काम किन भइरहेको छ ? सरकार लोकप्रिय हुँदा नै पार्टी बलियो हुने होइन र ? सोचौं पार्टी एकीकरणपछिको यति लामो अवधिसम्म पनि हाम्रो पार्टी एउटै पार्टीभन्दा संयुक्त मोर्चाजस्तो किन छ ? एकतापछि हाम्रो सरकार एउटा पार्टीको सरकारभन्दा संयुक्त सरकारजस्तो किन छ ? यस्तो संक्रमण अन्त्य गर्न ढिला भएन ? यसका लागि नेतृत्व तहका कमरेडहरूको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दैन र,’ ओलीले प्रश्न गरेका छन् ।
त्यसको जवाफ पनि दाहालले पत्रबाटै दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चिप्ला कुरा गर्ने गरेको बताउँदै दाहाले त्यसलाई ‘विष भरिएको घैंटोको मुखमा रहेको अमृत’ को उपमा दिएका छन् । सचिवालयका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको पत्रमा भनिएको छ, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि यो चिप्ला र गुलिया शब्दजालभित्र प्रस्तुत गरिएको झूठको पुलिन्दा हो ।
अनुभूतिको तहमा मैले यसलाई ‘विष कुम्भम् पयो मुखम्’ का रुपमा महसुस गरें । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि अतिचार गरेको बताउँदै प्रचण्डले पत्रमा भनेका छन्, ‘अति गर्नू अतिचार नगर्नू भन्छन्, यो देख्दा त मलाई पनि भन्न मन लागेको छ, इन अफ इज इनअफ ।’